Ụbọchị My Pet » 3 Ihe I Kwesịrị Ịmara Ọ bụrụ na Ị Chọrọ Ya mehie
emelitere ikpeazụ: Oct. 28 2020 | 2 min agụ
Ọtụtụ ndị inyom ga-ekweta na-ekwu na taa ndị ikom na-egosi a ike egwu nkwa mgbe ọ na-abịa mmekọrịta. The ọkà n'akparamàgwà mmadụ ga-agwa gị otu ọchịchọ a chọpụtara na ndị na-abụghị mmekọahụ na ga-akọwa unu nile banyere egwu a si mgbọrọgwụ – na-akpata nchegbu na-atụfu nnwere onwe ha, nzuzo ha na onwe. Ị na-echiche na onye gị na adịghị njikere ime? I kwesịrị ịma na i nwere isi gị nwoke obi na omume gị nwere oké mmetụta ya na mkpebi nke na-anọ na-enwe mmekọrịta ma ọ bụ na-ewere ya na-esonụ larịị. Nkwa abụghị ihe a nwoke nwere ike na-ekwu n'ime, ị maara na-ama. Ọ bụrụ na ị bulie nri oge, niile i nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị chọrọ ya ime bụ ime ka na pụrụ iche mmetụta ga-eme ka ya na-aghọta na ị bụ Onye.
Mee ya pụrụ iche
Ọ dịghị onye nwere mmasị n'ebe mmetụta nke a na-enyocha dị ka ma ọ bụrụ na jupụta elu a ọrụ nkọwa. Wepụta oge ga-esi mara nwoke gị kama na-eme ya na-aga site a checklist iji jide n'aka na ọ bụ ihe ziri ezi onye. Mgbe akpa, ọtụtụ ndị n'oge a inyom nwere àgwà nke na-ekpughe ihe ha chọrọ si a nwoke tupu ọbụna na-amata onye ọ bụ n'ezie. Ọ bụ n'ihi na anyị ná ndụ? Enwere Ike, kama ị ga-ekwe ka ndị na-elekọta mgbali nke ịchọta a di na-eguzo ụzọ gị obi ụtọ. Mee ka gị na nwa okorobịa pụrụ iche maka ihe ọ bụ n'ọnọdụ ebute ozi na ọ na-ejuputa elu a ohere. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị; ma ọ bụrụ na ọ bụghị ndị kasị atụ mmadụ egwu nwere mgbe ọ na-abịa mmekọrịta na nkwa. Mgbe otu nwoke na-akawanye mara na ị na-emecha na-achọ a di, ọ ga-elu. Gị n'oge mmekọrịta na a mmekọrịta kwesịrị niile banyere ịmara nwoke. Ọ na-eme ya na-enwe nwetara.
Ekwela ka obi dị ya kwa manyere
E nwere elu Ohere gị Ihọd ga na-echi ọ bụrụ na ị ntabi ịgbanwee ndụ gị nile gburugburu ya. Ihe-eme nwayọọ nwayọọ, ọbụna mgbe anyị na-ekwu banyere ịhụnanya na mbụ n'anya. Ọzọkwa, nkwa nwere na-abịa site n'ime na-apụghị-amanye onye ọ bụla. Enweghị eleghara ya, na-ebi ndụ na ndụ gị! Mee oge izute ya, Ma echefula na ị nwere ezinụlọ na ndị enyi dị ka nke ọma. N'akụkụ aka nke ọzọ, adịghị ize na-ahapụ ya kwa nkeji ise. Na-enwe ọṅụ na a pụrụ ịdabere! Mee ka obi dị ya kechioma ka ị na ogologo na-echere maka mmetụta nke nkwa ga-ịzụlite.
Mepụta a nti oge na ya
A ogologo na-adịgide adịgide mmekọrịta-apụghị wuru na-enweghị ike na ntọala na ịhụnanya gị dị ka onye ọ bụla ọzọ na-echeta na ị na-dum n'ịkpa na ya. Jide n'aka na ị ga-ahụ oge na ị na-eji gị creativity ka iju ya na-ewu ụdị echeta. Guzogide na agụụ na-ekwurịta banyere ọdịnihu nke mmekọrịta gị, ọ sọkwara gị ịna-agwakarị n'elu isiokwu. Na-atọ ọchị na igwuri egwu! Ịbụ onye ọ na-enwe mmasị ịbụ na! Ezi oge bụ isi ihe na-obi mmadụ.